XOG: Wakiilada beesha caalamka oo doonaya inay tallaabooyin qaadaan & xogo laga helayo.
April 8, 2021 Xuseen 10
Puntlandtimes (MUQDISHO)-Ilo xogagal ayaa warbaahinta u sheegay in ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan iyo Amp Donald Yamamoto ay horkacaya wadahadalan, ay sidoo kale telefoonka kula xiriiri doono madaxda dowlada federaalka ee mudo xileedkoodu dhamaaday.
Wakiilada beesha caalamku waxa ay durba bilaabeen dedaalo weji cusub leh kuwaasi oo la sheegay inay horseedi karaan in cadaadiska ku xoogeysto madaxda Soomaalida iyo in ay geedi-socodka doorashada ay la wareegaan maadaama madaxdu ku guuldaraysteen in ay xaliyaan khilaafka doorashada.
Tallaabooyinka ay qaadi karaan wakiilada beesha caalamku si xal looga gaaro khilaafka doorashada Soomaaliya waxaa kamid ah ;.
1: In gobolka Gedo loo dhiso maamul madax banaan si looga korqaado culayska madaxweyne Farmaajo.
2: In ammaanka doorashooyinka uu la wareego Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
3: In wax laga badalo guddiga lagu muransanyahay doorashooyinka
4: Ugu dambayn wakiilada beesha caalamka ayaa doonaya inay dammaanad qaadaan natiijooyinka la gaaro.
Waakaas caqliga walaweyn waxaas aan caqliga iyo cilmiga lahayn ayay Somaliland sovereignity iyo xornimadii ay Gumaystihii ingiriiska ka qaateen u lumiyeen oo ay yidhaahdeen aynu wax isku darsano. Caqli laaweyaal weligoodba aan iyagu caqli ay lee yihiin isku maamulin oo weligoodba webiyada uu Talyaanigu kaga talaabayay ayaanu wax ku darsanay. Maantana laba ambassador ayaa u taliya oo maraykan ah awelba faqash cilmi iyo caqli malahayn duli alle idin bed.
‘Wanlaweyntii’ xal waa keeniweyday 30 sano, waxaase kasii daran ‘Jamhuuriyadda Barakaysan’ oo noqotay nayl ku agwareegaysa hooyadeed oo lugta ka xiran, oo ka ag dhaqaaqi weyday …naaaa….bacaaac.
Kkkkkkkkk warkaaga waa jawaab waafiya oo ku socota NAJAXXwasna ku qoslay.
Dubkaad kaga muldhisay midkaa!
Ķķkkkkk waxaan ku qoslayaa Wakiilada beesha caalamka oo doonaya inay tallaabooyin qaadaan & xogo laga helayo. KKKK WARKAAN WAA MALA AWAAL WADANKA DOWLAD AYUU LEEYAHAY EE XAGEED KA KEENTEEN BEENTAAN???????
Pintlandheer aaway Dowladu? Ma midka waqtigii ka dhamaaday? 4 sano oo Somalia waqti ka dhumiyey iminka wuxuu u dagaalami waa Qabiilkeyga State ha la siiyo???? Goroyo la ogaa oo Haad noqon weyday.. Allah Kareem..
Deni calooley iyo kooxdisa laba waji ayaa u furan iney saxiixan heshiiski 17sep kana qeybgalan doorashada ama iney dhahaan kama qeybgaleyno doorashada cuuuc iyo caaac iyo subax walba sharuud cusub la keeno socon meyso. Teedkale hadii gedo loo sameeyo maamul u gooni ah hiirana wey ku xigtaa…warku wuu iska cad yahay deni calooley iyo kooxdisa waxeey rabaan caqli xumadooda inuu farmaajo is casilo ama saxiixo waraaq dhaheyso wadanka madaxweyne kama ihi waana caqli maangab.
Waxaa yaab leh dadka aan ogeyn wadanka in uu dowlad lee yahay waxaan weydiinayaa soomali dadkeeda waxay sameysteen diin/sharci la yiraahdo dastuur oo qabya ah weliba weligii qabya ahaani doona iyo maamulo federal ah, hadaba dastuurkan cidii qorteyba waxaa ku qoran cutubkiisa 30 naad oo labada aqal saxiixen HAY ADAHA DASTUURI WAA IN SII JOOGAAN SII SHAQEEYAN INTII LAGA HELAAYO MIDKALE OO BADASHAA , hadaba hay adaha dastuuriga waxaa ay ka Kooban tahay madaxweyne xukuumad raisalwasaare iyo labada aqal iyo maxkamad dastuuri ah oo hada aan laheyn . CIDA LAH MADAXWEYNE FARMAAJO WARQAD HA QORO HOWL GAB HA AHAADO XUKUUMADIISANA HASII SHAQEYSO KKKKKKK NINKAA MA NIN FAYOW BAA ¿¿ mise wuxuu karabaa oo keliya bari baa farmaajo ku adkeeyay kkkkk raga waa la iska dhacshaa mise waalaga leexdaa ee dadka lagama laalaado sidii dhereerkii kkkkkkkk
Ma garan karo Rag iyo Dumar mid aad tahay, laakiin waxaad iila muuqataa in aad tahay, Iidoorkii iigu horreeyey ee Soomaaliya Godka dheer ee aay ka sii dhaadhaceyso ka naxaya!
Waa run oo mar kasta oo aay talada Soomaaliya dadkeeda ku heshiin waayaan, waxaa Xaakim u naqonaya nin Cad oo ah awalba kii ishaa u yeelay!
Waana kugu waafaqsanahay in aay tahay wax laga murugoodo in aay Wakiilo Caddaan ah yeeshaan, dhihidda ugu dambeeysa ee Soomaaliya!
Mushkilada jirtase waxaay tahay, xitaa idinkaa leh waan go’nay, meeshii waxaad ka dhigteen Maqaaxi Jifo hoosaaf u shidan oo aay intii kale Marti aan Karaamo lahayn ka yihiin!
Marka xaalka wuxuu u egyahay, Mid laga Go’ayna Caqli iyo Dal toona ma hayo, Mid waan Go’ay lehna ma fadhi Qurxoona. Oo hadalkii quusta ahaa ee Dr. Gabboose ayaa tusaale ugu filan, Qofkii wax fahmaya!
Reer somaliland waxaan oranlahaa somaliya meel khayr iyo sharaf leh maahan ee ka quusta, kuna quusta Puntland oo markii dowladii somaliya Farmaajo adeerkiis god dheer ku riday lagana quustay inta maamul dhisteen Puntland la yiraahdo tii somaliyana doonay iyakoo naf iyo maalba u huray villa wardhiigleyna dowladnimadii geeyay. Hadaba maxaae loogu abaal guday Puntland oo aan cay iyo nacayb ahayn iyo in afwayne kale oo doonaya inuu god kii afwayne ku riday somaliya 1991 mid kasii dheer ku rido loona sacbinaayo reer Puntland leeyihiin war ka daaya balse cadowga somaliya loo arko. Markaa reer somaliland waxaan oranlahaa Puntland ku quusta Illahbaa idinka ka xeeyay somaliya ee ka carara Puntland way ka tashandoontaa somaliya iyadaana kasii fogaandoonta Somaliland